ကျ​ေနာ်လည်း​ ဘာလိုလိုနဲ့​ ရွာမှာကျန်ခဲ့​တဲ့​ "​ေပါက်​ေကျာ်မ"ကိုသတိရမိ တယ်..။ သူ့​ခမျာ ြမို့​ကိုအ​ေတာ်လိုက်ချင်​ေနတာ ရွာမှာ​ေနရင် ထန်း​ေတာထဲမှာ အြမဲတမ်း​ မူး​ရူး​ေနတဲ့​ "ချက်ြကီး​"ကိုြကည့်​ြပီး​ မျက်စိ​ေနှာက် စိတ်ရှုပ်လို့​တဲ့​…။ အင်း​ေပါ့​ေလ… ​ေပါက်​ေကျာ်မ ခမျာ မျက်စိ​ေနှာက် စိတ်ရှုပ်တယ်ဆိုလဲ ရှုပ်ချင်စရာပါပဲ…။ ချက်ြကီး​တို့​ကမူး​လာရင် ထမီမနိုင် ပဝါမနိုင် ပုဆိုး​စလွယ်သိုင်း​နဲ့​ ​ေအာက်​ေချလွတ်​ေနပံုများ​ အသည်း​ယား​စရာြကီး​.. ဟီး​..ဟီး​…။ မျက်စိထဲ မြမင်​ေယာင်နဲ့​အံုး​ေနာ် ​ေတာ်ြကာ ချက်ြကီး​ ရှက်​ေနအံုး​မယ်…။ ချက်ြကီး​တို့​က အိမ်ြပန်ရင် ​ေကာင်း​ေကာင်း​မြပန်ဘူး​ အဆို​ေလး​ အက​ေလး​ပါမှြပန်တာ..။ ချက်ြကီး​တို့​က ရွာမှာ​ေန​ေပမဲ့​ အထင်မ​ေသး​နဲ့​အံုး​ ြမို့​ေပါ်က ဟစ်​ေဟာ့​ ဆိုတာ ြကီး​ကို သူ​ေကာင်း​ေကာင်း​သိတယ်…။ ဘယ်​ေလာက်​ေတာင်​ေကာင်း​ေကာင်း​သိ လည်း​ဆိုတာကို ြကွား​ချင်လို့​ထင်ပါ့​ သူရဲ့​ ​ေသာက်​ေဖာ်​ေသာက်ဖက်ြဖစ်တဲ့​ လုလင်​ေတွကို ဟစ်​ေဟာ့​အကဆိုတာ ဒီလိုကွ လက်တစ်ဖက်ကို အ​ေပါ်မှာ ​ေြမှာက်ထား​ြပီး​ ကျန်တဲ့​လက်တစ်ဖက်က ​ေပါင်း​နှစ်လံုး​ြကား​ကိုကုတ်ြပီး​ "မင်း​တို့​ လက်​ေတွ​ေလထဲမှာ​ေြမှာက်ထား​လိုက် ​ေဟ့​..ယို့​…အို့​အား​..အို့​အား​..ယဲ့​"ဆိုြပီး​ ကြပလိုက်တာ သူ့​ရဲ့​လုလင်​ေတွက မျက်လံုး​ေလး​ြပူး​လို့​ ​ေမျာက်ကပွဲြကည့်​ေန တယ်ထင်ြပီး​ဆက်ြကည့်​ေန​ေလရဲ့​…။ ​ေနာက်ဆံုး​ပိတ် "​ေဟ့​..ယို့​… အို့​အား​..အို့​အား​..ယဲ့​" ဆိုတာ ​ေပါင်နှစ်လံုး​ြကား​က ​ေပွး​ဝဲ​ေတွကို ကုတ်မိလို့​ ြငီး​တာြဖစ်မယ်…။ ဘာ​ေြပာ​ေြပာသီချင်း​တစ်ပုဒ် မဟုတ်ရင်​ေတာင် စာသား​တစ်​ေြကာင်း​ေတာ့​ ြဖစ်သွား​တာပဲ…။ ဒီလိုနဲ့​ထန်း​ေတာထဲမှာ ​ေယာင် လည်လည်နဲ့​ သီချင်း​ေတွဆိုလိုလို ကလိုလို အြပီး​ ရွာအဝင်မှာ ​ေရအိုး​ေလး​ေတွ ကို​ေခါင်း​ေပါ်ရွက်ြပီး​ ​ေရခတ်ဆင်း​လာတဲ့​ ​ေပါက်​ေကျာ်မ အပါအဝင်လံု​ေမတစ် သိုက်ကို​ေတွ့​ေတာ့​ ချက်ြကီး​က အား​ရပါး​ရြကီး​ဆိုလိုက်တာများ​ "အိုး​ေလး​လှုပ်ပါ ​ေဟ့​… အိုး​ေလး​လှုပ်ပါ​ေဟ့​... ​ေကာင်မ​ေလး​ေတွ… အိုး​ေလး​လှုပ်​ေဟ့​… ​ေရအိုး​ေလး​လှုပ်ပါ​ေဟ့​…" ​ေပါက်​ေကျာ်မြကား​လိုက်​ေတာ့​ "ဒီမှာ ချက်ြကီး​နင် ​ေတာ်​ေတာ်ရိုင်း​လှချည်လား​ နှမချင်း​ကိုယ်ချင်း​မစာဟယ်.." ချက်ြကီး​က "ငါဘာရိုင်း​လို့​လဲ ငါ့​ငါ သီချင်း​ဆို​ေနတာ ဘာြဖစ်လဲ" ​ေပါက်​ေကျာ်မက "ဘာြဖစ်ရမှာလဲဟဲ့​…နင်ဆိုတဲ့​ သီချင်း​ကရိုင်း​လို့​ေပါ့​…" ချက်ြကီး​က "ဘာရိုင်း​စရာ ရှိလည်း​သီချင်း​ပဲ.." ​ေပါက်​ေကျာ်မ "​ေအး​..အဲ့​ဒါ​ေြကာင့်​ ​ေြပာတာ​ေပါ့​ဟဲ့​ ဘာတဲ့​ .. အိုး​ေလး​လှုပ်ပါ​ေဟ့​… အိုး​ေလး​လှုပ်ပါ​ေဟ့​…နဲ့​ ဒါ​ေတာင် ​ေစာ်ကား​လို့​အား​မရ ​ေသး​ဘူး​ ​ေကာင်မ​ေလး​ေတွ ဆိုတဲ့​ အသိ​ေပး​ စာသား​ကပါလိုက်​ေသး​ တစ်ြခား​လူ​ေတွကို တာ​ေြကာလို့​ရမယ် ​ေပါက်​ေကျာ်မကို​ေတာ့​ေြကာလို့​မရဘူး​ဟင်း​…. ​ေနှာသွား​မယ်"။ ချက်ြကီး​ဆိုတဲ့​ ​ေရ အိုး​ေလး​လှုပ်ပါ​ေဟ့​… စာသား​က ဘယ်လို လုပ် ​ေပါက်​ေကျာ်မရဲ့​ နား​ထဲကို မဝင်လည်း​မသိလိုက်ပါ။ ချက်ြကီး​လည်း​ရှင်း​ြပချိန်​ေတာင် မရလိုက်။ မနား​တမ်း​ "​ေပါက်​ေကျာ်မတဲ့​ တစ်​ေပါက်ပဲရှိတယ် နှစ်​ေပါက်ရှိရင် ဆင်​ေကာ်နဲ့​ ပိတ်လိုက်မယ်.." ​ေပါက်​ေကျာ်မက မီး​ြခစ်ဆံလိုပဲ မြခစ်လိုက်နဲ့​ ြခစ်လိုက်ရင်မီး​ပွင့်​သွား​မဲ့​ အမျိုး​အစား​ထဲကဗျ…။ ​ေပါက်​ေကျာ်မရဲ့​ "ဇ" ကိုသိ​ေနြပီး​ြဖစ်တဲ့​ ချက်ြကီး​က ​ေြကာက်​ေြကာက်လန့်​လန့်​နဲ့​ "​ေပါက်​ေကျာ်မကလည်း​ဟာ ငါမူး​ေနလို့​ သီချင်း​ ​ေလျှာက်ဆိုတာပါဟာ ​ေနာက်မဆိုနဲ့​ဆို မဆို​ေတာ့​ဘူး​ေနာ်.. ​ေနာ်လို့​.. ​ေအ့​.." စကား​အဆံုး​ရဲ့​ နိဂံုး​လား​ေတာ့​မသိဘူး​ ​ေလချိန်ကတတ်​ေန​ေသး​….။
ဒါ​ေြကာင့်​ေြပာတာ​ေပါ့​ ​ေပါက်​ေကျာ်မ စိတ်ညစ်မျက်စိ​ေနှာက်ပါတယ်ဆို။ ဒီလိုနဲ့​ ချက်ြကီး​လည်း​ မူး​ရင်ရစ်တတ်တဲ့​ မူး​ရစ်ရာထူး​က​ေန အြငိမ်း​စား​ယူလိုက် ြပီး​ ကာလသား​ေခါင်း​ေဆာင်လုပ်​ေန​ေလရဲ့​…။ ​ေပါက်​ေကျာ်မလည်း​ အား​ကျမခံ သူများ​ထက်ထူး​ နံဖူး​မှာ ဂျို​ေပါက်ချင်​ေန​ေလရဲ့​။ ဟာ.. မြဖစ်​ေသး​ပါဘူး​ ​ေဘး​ကို​ေလျှာ်ထွက်သွား​ြပန်ြပီ ြပန်ထိန်မှ။ ​ေပါက်​ေကျာ်မလည်း​ ရွာမှာ ကွမ်း​ေတာ်ကိုင် (ကွမ်း​ေတာင်ကိုင်) ြဖစ်​ေန​ေလတယ်ဆိုပဲ..။ တစ်​ေန့​ေတာ့​ရွာမှာ ဘုရား​ပွဲလုပ်ဖို့​ ကာလသား​ေခါင်း​ေဆာင် နဲ့​ ကွမ်း​ယာကိုင် မှား​ြပန်ြပီ ကွမ်း​ေတာ်ကိုင် ​ေခါင်း​ေဆာင်​ေတွကို ​ေခါ်ြပီး​ ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​က "အိမ်း​… ငါတို့​ရွာမှာ နှစ်စဉ်ဘုရား​ပွဲကျင်း​ပ​ေနြက ြဖစ်တယ် ဒါ​ေပမဲ့​ ဒီတစ်နှစ်မှာ အရင်နှစ်​ေတွထက် ြမိုင်သွား​ေအာင် မင်း​တို့​နှစ်​ေယာက်​ေပါင်း​ြပီး​ ​ေတာ​ေခါ်သံချပ် ြမို့​ေခါ်ဟစ်​ေဟာ့​ ​ေလး​ဘာ​ေလး​လုပ်ြကကွာ ဘုန်း​ြကီး​အား​ေပး​မယ်"…။ နှစ်​ေယာက်သား​ ဝမ်း​သာ လံုး​ေြမ​ေပါ်ြပုတ်ကျ မှာဆိုး​လို့​ထင်ရဲ့​ ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် " ယို့​.. မှန်​ေတာ် လှပါ ဘဘုန်း​ြကီး​ဘုရား​" ဘုန်း​ြကီး​လည်း​ "အိမ်း​.." တစ်လံုး​နဲ့​ပဲ အံ့​ဩ​ေန​ေလရဲ့​….။ မူး​ရစ်အြငိမ်း​စား​ ချက်ြကီး​က ကာလသား​ေခါင်း​ေဆာင်ဆို​ေတာ့​ သူ့​ရဲ့​လုလင်​ေတွကို ​ေခါ်ြပီး​ အြကုတ်ထံ အြကံထုတ်​ေနဆဲမှာ..ကွမ်း​ေတာ်ကိုင် မိ​ေပါက်​ေကျာ်တစ်သိုက် က​ေတာ့​ တစ်ရံုး​ရံုး​နဲ့​ ​ေဆွး​ေနွး​အတင်း​တုပ်​ေနြက​ေြကာင်း​…။ အ​ေြကာင်း​ရင်း​က ဘုရား​ပွဲမှာ သံချပ်ဆိုလား​ ဟစ်​ေဟာ့​ ဆိုလား​ ​ေအာ်ဖို့​ေဆာ်ဖို့​တဲ့​။ ဒီလိုနဲ့​သူတို့​ေတွ တိုက်ထား​တဲ့​ ​ေတာ​ေခါ်သံချပ် ြမို့​ေခါ်ဟစ်​ေဟာ့​ဆိုတာြကီး​ကို ြမိုင်​ေအာင်ဆိုမဲ့​ အချိန်ကျ​ေရာက်လာခဲ့​ပါတယ်။ သူတို့​ေတွစင်​ေပါ်တတ်​ေရာက် ​ေနရာယူဖို့​ ​ေလာ်နဲ့​ေအာ်​ေခါ်တဲ့​သူက​ေတာ့​ သူြကီး​ထိပ်​ေြပာင် ပဲြဖစ်ပါတယ်..။ "အခုချိန်ကစြပီး​ ဒီစင်​ေလး​ေပါ်မှာ အြပိုင်ကုန်း​ေအာ်မဲ့​ ကာလသား​ေခါင်း​ ချက်ြကီး​ အဖွဲ့​နဲ့​ ရွာရဲ့​ကွမ်း​ေတာ်ကိုင်​ေခါင်း​ ​ေပါက်​ေကျာ်မ အဖွဲ့​တို့​ဟာ အခု​ေခတ်မှာ ​ေခတ်စား​ေနတဲ့​ ဘာတဲ့​…?" သူြကီး​က ဟစ်​ေဟာ့​ကို​ေမ့​ေနလို့​ စမ်း​တဝါး​ဝါး​နဲ့​ ​ေခါင်း​ကုတ်ဖင်ကုတ်လုပ်​ေနတဲ့​အချိန် စင်​ေအာက်မှာ ​ေြပာင်း​ဖူး​ြပုတ်​ေရာင်း​ေနတဲ့​ ဂျမ်း​စိန်က ​ေအာ်​ေြပာလိုက်တယ် "သူြကီး​ေရ မသိရင် ​ေခတ်​ေနာက်ကျသွား​မယ်​ေနာ် မှတ်ထား​အံုး​ ဟစ်​ေဟာ့​ ဗျို့​" သူြကီး​လဲ ရှက်ကိုး​ရှက်ကန်း​နဲ့​ " ဟစ်​ေဟာ့​လို့​ေခါ်တဲ့​ ရွာ​ေခါ်သံချပ်ကို အြပိုင်ဟီး​ပါ ​ေတာ့​မယ်ခင်ဗျာ…" ရွာသား​ေတွလည်း​နာမည်အဆန်း​ကို ြကား​လိုက်ရလို့​ ဘုမသိ ဘမသိနဲ့​ လက်ခုပ်တီး​လိုက်တာ သူြကီး​ေတာင် ြကက်သီး​ေမွး​ညင်း​ထ သွား​တယ်…။ ဒီြကား​တဲ့​ အဖွား​အိုတစ်​ေယာက်က "အခုနက ဂျမ်း​စိန်မ​ေရာင်း​ သွား​တာ ဟစ်​ေဟာ့​ဆိုလား​မသိဘူး​ ​ေခါ်​ေပး​စမ်း​ပါအံုး​ေအ ငါတစ်ခါမှ မစား​ဖူး​လို့​ ဝယ်စား​ြကည့်​မလို့​" မှတ်က​ေရာ..။ ဒီလိုနဲ့​ ချက်ြကီး​အဖွဲ့​နဲ့​ ​ေပါက်​ေကျာ်မ အဖွဲ့​နှစ်ဖွဲ့​ ​ေရာက်လာပါြပီ သူတို့​ြမိုင်မဲ့​ သီချင်း​က စိုင်း​စိုင်း​ခမ်း​လှိုင်ရဲ့​ ​ေတာ​ေဂါ်လီ သီချင်း​ကို ြဖတ်ဆိုြကမယ်လို့​ ကျ​ေနာ်ဆီ ဒီဝတ္တုတို​ေလး​ မ​ေရး​ခင်အချိန်​ေလး​မှာ အင်တာနက်က​ေန တဆင့်​ email နဲ့​ သတင်း​ြကိုပို့​ထား​တယ်ဗျ…။ သူတို့​လည်း​ေခတ်မှီသူ​ေတွပဲ​ေနာ်.. ဟဲ..ဟဲ..။ ကျွန်​ေတာ်နား​ထဲ ​ေလာ်ြကီး​ေြကာင့်​ တစ်စွန်း​တစ်စြကား​လိုက်ရတာက​ေတာ့​ ချက်ြကီး​က စဆိုတယ် "​ေဟ့​… ယို့​.. ငါ့​နာမည် ​ေတာချက်ြကီး​ သိပ်ကိုရူး​.." ​ေပါက်​ေကျာ်မလည်း​ အား​ကျမခံ "​ေဟ့​…ယို့​.. ငါ့​နာမည် စိန်​ေပါက်​ေပါက် သိပ်ကို​ေချာ.." ​ေနာက်လိုက် အဖွဲ့​ေတွက သံ​ေယာင်လိုက်ြကတာ နား​ေထာင်ြကည့်​ပါအံုး​… စိုင်း​စိုင်း​ခမ်း​လှိုင်ရဲ့​ ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် သီချင်း​အစကလို "ချက်ချက်နဲ့​ ​ေပါက်​ေပါက်တို့​က​ေတာ့​ ဒီစင်​ေပါ်က ​ေနလုပ်ချလိုက်ြပန်ြပီ.." ​ေကာင်း​လိုက်တဲ့​ အင်ထရို..။ ဒါ​ေတာင်မှ သူတို့​အသံတူ​ေအာင် မနည်း​ကျင့်​ထား​ရတယ် အချိန်ကလဲ အများ​ြကီး​ယူရတယ် တစ်မိနစ်တဲ့​…။ ​ေနာက်ဆံုး​ မြကား​တစ်ချက်ြကား​တစ်ချက်နဲ့​ ြကား​လိုက်ရတာက ​ေတာ့​ ပထမ ချက်ြကီး​အသံ ြပီး​ေနာက် ​ေပါက်​ေကျာ်မအသံ….
" အိုး​ေလး​လှုပ်ပါ​ေဟ့​…. ​ေအး​လို့​မလှုပ်နိုင်ဘူး​….. "
ဘာရယ်မဟုတ် နည်း​နည်း​ေလာက်ြပံုး​မိရင် ​ေကျနပ်ပါသည်။ ဒီဝတ္တုတို​ေလး​ကို E-book အ​ေနနဲ့​လိုချင်ရင်
စိုး​ထက် - Soe Htet ! April 6, 2008 at 1:37 PM
ဟစ်​ေဟာ့​ သံချပ် နား​ဆင် ... အဲ​ေလ .. ဖတ်ရှု သွား​ပါတယ် ဗျို့​ :D
​ေနွမုန်တိုင်း​ April 6, 2008 at 3:21 PM
ရွာမှာ ​ေတာ်​ေတာ်နာမည်ြကီး​တဲ့​ချက်ြကီး​ ​ေပါက်​ေကျာ်မ နဲ့​ေတွ့​မှ ​ေသြပီဆရာပဲ.. ​ေကာင်း​တယ်ဗျို့​ ဒါမျိုး​ေလး​ေတွ များ​များ​ေရး​ အား​ေပး​ေနတယ် :D
Black Dream April 6, 2008 at 4:49 PM
နှံ​ေကာင် April 6, 2008 at 11:19 PM
ဟား​ဟား​ဟား​ .. သီချင်း​ဆို​ေနတဲ့​ပံု​ေတွ မျက်စိထဲ​ေတာင် ြမင်​ေယာင်တယ်
ယုန်က​ေလး​ April 7, 2008 at 10:06 AM
ဒီစာသား​ေလး​ေတွက ​ေတာ်​ေတာ်ကို ​ေကာင်း​တယ်​ေနာ် ရီလည်း​ရီရတယ်။ ​ေကာင်း​တယ် ဆက်​ေရး​ အား​ေပး​ပါတယ်​ေနာ်
ြကယ်စင်နတ်သမီး​ April 10, 2008 at 3:27 PM
​ေဇာင်း​ေရ ြပံုး​ယံုတင်မဟုတ်ဘူး​... ခွက်ထိုး​လှန်ြပီး​ေတာ့​ ရယ်သွား​ပါတယ်​ေနာ်... ဟာသ​ေလး​ေတွကို မဖတ်ရတာ ​ေတာ်​ေတာ်ြကာြပီ... အခုလို ဖတ်ရ​ေတာ့​ ဝမ်း​သာပါတယ်ကွယ်...
ပူဇာကို April 15, 2008 at 10:52 AM
မိုက်တယ် ​ေနာက်ဆက်တွဲ​ေတွ ထပ်လုပ်​ေပး​ပါ။
ပူဇာကို April 15, 2008 at 10:57 AM
သဇင်ဏီ June 26, 2008 at 8:30 PM
​ေဇာင်း​ June 27, 2008 at 2:48 PM
အား​ေပး​ြက​ေသာ Blogger ညီအကို​ေမာင်နှမ များ​ကို ​ေကျး​ဇူး​အထူး​တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ......
:P :) :D :B ;)
ကွမ်း​ေတာ်ကိုင် မိ​ေပါက်​ေကျာ်တစ်သိုက် က​ေတာ့​ တစ်ရံုး​ရံုး​နဲ့​ ​ေဆွး​ေနွး​အတင်း​တုပ်​ေနြက​ေြကာင်း​…။ ဆိုပဲ
ဆရာ​ေဇာင်း​တစ်​ေယာက် "အတင်း​တုပ်" ဆိုတဲ့​စကား​ကို လွန်စွာမှနှစ်သက်တယ်ထင်ပ။ :P အ​ေရး​အသား​ေကာင်း​လို့​ စာဖတ်ရင်း​နဲ့​ ြမင်​ေယာင်မိပါ၏။ ထို့​ေနာက် ရယ်မိပါ၏။